foot – Healthy Life Journal
ခြေထောက်တစ်ဖက်ကြီးနေသည့် အမျိုးသမီးကို ကင်ဆာကုထုံးဖြင့် ကုသအောင်မြင်ခဲ့
———၊ ကိုထက် ၊——— အသက် ၂၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ အာရီနာဖာရိုဟာ မွေးရာပါရောဂါတစ်မျိုးကြောင့် သူရဲ့ခြေထောက်တစ်ဖက်ဟာ သာမန်အရွယ်ထက် နှစ်ဆပိုကြီးနေကာ လမ်းမလျှောက်နိုင်ဘဲ အိပ်ရာထဲမှာပဲ နေခဲ့ရပါတယ်။ နေတိုင်းနာကျင်မှုတွေကြောင့် ဆေးတွေလည်း မှီဝဲနေရကာ၊ ခွဲစိတ်မှုများစွာ ခံယူခဲ့ပေမယ့် သက်သာပျောက်ကင်းမှု မရှိခဲ့ပါဘူး။ ဒါပေမဲ့...
———-၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— ခြေသည်းမှိုစွဲတဲ့ ပြဿနာဟာ စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေတဲ့ ပြဿနာတစ်ရပ်ပါ။ ခြေသည်းမှိုစွဲခြင်းအတွက် စိတ်ညစ်မရအောင် ရှလကာရည်ရှိရုံနဲ့ အဆင်ပြေမယ့် အလွယ်နည်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ အဆင့် (၁) သင့်ခြေသည်းက အလွန်ထူထဲနေရင် ရှလကာရည် စိမ့်ဝင်လွယ်အောင် ခြေသည်းကို ညင်ညင်သာသာ...
—–၊ ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးအထူးကု ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း ၊—– Q. လက်စွယ်ငုပ်ခြင်း၊ ခြေစွယ်ငုပ်ခြင်းအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ A. အများအားဖြင့် ခြေစွယ်ငုပ်တာက အဖြစ်များတတ်ပါတယ်။ တစ်ခါတလေ လက်သည်းတွေမှာလည်း လက်စွယ်ငုပ်တာမျိုး ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ လက်စွယ်ငုပ်တာနဲ့ ခြေစွယ်ငုပ်တာမျိုး မဖြစ်အောင်...
လက်သည်း၊ ခြေသည်း အားနည်းကြွပ်ဆတ် မှုကို ဖြေရှင်းနိုင်မည့် သဘာဝနည်း ၁၀
——-၊ မီမိုးမေ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——- မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ အလှအပထဲမှာ လက်သည်း၊ ခြေသည်း လှပသန်စွမ်းကျန်းမာဖို့လည်း အရေးပါနေပါတယ်။ လက်သည်းကြွပ်ဆတ်ပြီး အားနည်းနေရင် လက်သည်းသန်စွမ်းကျန်းမာစေဖို့ လိုက်နာသင့်တဲ့ သဘာဝနည်းတွေ ရှိနေပါတယ်။ (၁) ဗီတာမင်အီး ဗီတာမင်အီးက လက်သည်းအခြေအနေကို ကောင်းစေရုံသာမက လက်သည်းပန်းကုံးတွေကိုပါ...
သုံးလက်မခွဲအမြင့်ရှိ ဒေါက်ဖိနပ်က အဆစ်များကို အရွယ်မတိုင်မီ ယိုယွင်းစေနိုင်
………………၊ ကိုထက် ၊……………… ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးတာက ခြေထောက်နာကျင်စေရုံသာမက အဆစ်ရောင်နာဖြစ်နိုင်ခြေကိုလည်း မြင့်တက်စေနိုင်ပါတယ်။ သုံးလက်မခွဲအမြင့်ရှိ ဒေါက်မြင့်ဖိနပ်စီးပြီး လမ်းလျှောက်တာကြောင့် အသက်ကြီးသူနဲ့ ဒူးဆစ်ရောင်ရမ်းနာရှိသူတွေမှာတွေ့ရတဲ့ လမ်းလျှောက်ပုံအတိုင်း ဖြစ်လာစေနိုင်ကြောင်း လေ့လာတွေ့ရှိမှုအရ သိရပါတယ်။ အခုတွေ့ရှိမှုဟာ ရိုးဆစ်ရောင်ရမ်းနာက အမျိုးသားတွေထက် အမျိုးသမီးတွေမှာ နှစ်ဆပိုပြီး အဖြစ်များရတဲ့...
ဒေါက်တာကျော်စွာဦး (ရောင်ခြည်သစ်ကုသိုလ်ဖြစ်ဆေးခန်း-တာဝန်ခံ)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း Q. ခြေတွေ၊ လက်တွေ ထုံကျဉ်တာက ဘာကြောင့်ဖြစ်ရပါသလဲ ဆရာ။ A. အတော်များများတော့ ခြေတွေ၊ လက်တွေ ထုံတာ၊ ကျဉ်တာတွေ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ဘယ်လိုလူတွေမှာ ခြေတွေ၊ လက်တွေ ထုံကျဉ်တာတွေ ဆက်စပ်ဖြစ်တတ်သလဲဆိုတော့...
OA ဒူးနာရောဂါသူများ ဆေးကုသရာတွင် အောင်မြင်ထိရောက်မှုရှိစေရန် သိထားသင့်သည့်အချက်များ
ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) Q. OA ဒူးနာရောဂါသူတွေ ဆေးကုသရာမှာ အောင်မြင်ထိရောက်မှုရှိစေဖို့ ဘယ်လိုအချက်တွေကို လိုက်နာသင့်ပါသလဲ ဆရာ။ A. ဆေးကုတယ်ဆိုတာ ဆရာဝန်က တစ်ဖက်သက်ကုသပေးလို့ မရပါဘူး။ လူနာကလည်း ကိုယ်ခံစားနေရတဲ့ ရောဂါအကြောင်း၊ ကုသမှုအကြောင်း၊ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအကြောင်း...
ခြေမဘုထွက်ခြင်း (Bunion )
ပါမောက္ခဦးနေဝင်း (အရိုးခွဲစိတ်အထူးကု ဆရာဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း) Q. ခြေမဘုထွက်ခြင်းအကြောင်း သိပါရစေ ဆရာ။ A. အရပ်ထဲမှာတော့ Bunion လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဆေးပညာအရတော့ Halus Vallgus လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီရောဂါက အများအားဖြင့် ရှူးဖိနပ်စီးတဲ့လူတွေ၊ နိုင်ငံတွေမှာ အဓိကဖြစ်တတ်ပါတယ်။ ရှူးဖိနပ်မစီးတဲ့...